“But we remain unclear as to which direction the court is likely to take as the political situation in Zimbabwe is fluid whereas the situation moving into the national elections in March 2008 was much more clear cut,” Mutebuka said.
Chengetai Mupara, a human rights and immigration lawyer practicing in the UK said although the case focuses on a handful of Zimbabweans whose asylum claims were rejected, it will have implications for asylum seekers from other foreigners in the UK, and could set a disturbing precedent forces people to return to their countries and pretend that they support bad governments.
He added: “The fact of the matter is that there are some Zimbabweans who do not have firm political views in support of either Zanu PF or the MDC but they still claim they will face persecution in Zimbabwe because if they are asked to demonstrate their support and loyalty to Zanu PF – through repeating Zanu PF slogans or songs - they will not be able to do that.”
“The Home Office is saying people like them could go back to Zimbabwe and when asked to demonstrate such loyalty they could lie about their true political views and state that they support Zanu PF in order to evade persecution.”
Interview With Chengetai Mupara
Interview With Brighton Mutebuka